बिगबासमा सन्दीपको सनसनी - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
बिगबासमा सन्दीपको सनसनी
अस्ट्रेलियाको बिगबास टि-२० क्रिकेट लिगको डेब्यू खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दुई विकेट लिएका छन्।
सन्दीपले आफ्नो पहिलो ओभरमा नै दुइ विकेट लिएका थिए। आठौं ओभरमा व्यक्तिगत पहिलो ओभर लिएर आएका सन्दीपले दोस्रो बलमा शेन वाट्सन(२२ रन)लाई पवेलियन फर्काएका हुन्। यस्तै सोही ओभरको अन्तिम बलमा सन्दीपले क्यालुम फर्गुर्सन(१५ रन)लाई कट एण्ड बोल्ड पारेका छन्। सन्दीपले पहिलो ओभरमा ३ रनमात्रै खर्चेर २ विकेट लिए।
Sandeep's Army are going mental on the hill!
The young man's taken TWO wickets in his first #BBL08 over!! pic.twitter.com/Glt5EUG53l
यस्तै टोलीको दशौं ओभरमा आफ्नो व्यक्तिगत दोस्रो ओभर लिएर आएका सन्दीपले ६ रन खर्चे। जोह रुटले चौथो बलमा उनलाई चौका प्रहार गरेका थिए।
यस्तै व्यक्तिगत तेस्रो ओभरमा सन्दीपले १२ रन खर्चे। सो ओभरको अन्तिम बलमा जोसन संगाले छक्का प्रहार गरेका थिए।
अन्तिम अन्तिम ओभरमा भने केही महँगा भए। व्यक्तिग चौथो ओभरमा सन्दीपले २ छक्कासहित १४ रन खर्चे। समग्रमा चार ओभरमा सन्दीपले ३६ रन खर्चदै २ विकेट लिए।
अस्ट्रेलिया क्रिकेटका पूर्वकप्तान माइकल क्लार्कले सन्दीपलाई पहिलोपटक अस्ट्रेलियन क्रिकेटका समर्थकहरु सामु पस्केका थिए। दुईवर्ष अघि क्लार्कले सन्दीपलाई आफ्नै खर्चमा अस्ट्रेलियाको ग्रेड क्रिकेट खेल्ने र प्रशिक्षणको वातावरण मिलाएका थिए। त्यसअघि हङकङ ब्लुजमा सन्दीप र क्लार्कले एउटै टिमबाट खेलेपछि उनीहरुको साइनो जोडिएको थियो।
त्यसपछि सन्दीपले एकपछि अर्को गर्दै सफलता हात पार्दै गए। खासमा २०१८ मा आइपिएल डेब्यूपछि सन्दीपले विश्वभर फ्रेन्चाइजी लिग खेल्न भ्रमण गरिसकेका छन्।
२०१८ जनवरीमा सन्दीपलाई दिल्लीले उनको आधारमुल्य २० लाख भारतीय रुपैयामा लिएको थियो। त्यसले उनलाई आइपिएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनायो। त्यही आइपिएलबाट सन्दीपकै भाषामा भन्नुपर्दा ‘चान्समा डान्स’ मार्दै उनी विश्वभरका फ्रेन्चाइजी लिगमा बिक्रि भए।
मार्चमा उनी वेस्टइण्डिजको क्यारिबियन प्रिमियर लिगका लागि सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रियट्स टोलीसँग अनुबन्धित भए। त्यसपछि उनले जुनमा मोन्ट्रोलियर टाइगर्सबाट ग्लोबल क्यानडा टी–२० खेले। जसको पाँच खेलमा उनले आठ विकेट लिएका थिए।
सेप्टेम्बरमा उनी अफगानिस्तान प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणका लागि नाग्राहार टोलीसँग अनुबन्धित भए भने अक्टोबरमा बिगबास र त्यही महिना बंगलादेश प्रिमियर लिगका लागि सिलेट सिक्सर क्लबसँग अनुबन्धित भए।
सन्दीपलाई आइपिएल टोली दिल्ली क्यापिटलले नयाँ सिजनका लागि अनुबन्ध गरिसकेको छ भने नोभेम्बरमा मात्रै सन्दीप पाकिस्तानी सुपर लिगका पनि अनुबसन्धित भइसकेका छन्।
विश्व क्रिकेटका हस्तीहरुले भरिएको बिगबास लिग खेल्ने सन्दीपको पनि सपना थियो। त्यही सपना सन्दीपले शुक्रबार पूरा गरेका छन्।
‘म धेरै नै उत्साहित छु। यो मेरालागि ठूलो अवसर हो,’ सन्दीपले अस्ट्रेलिया जानुअघि भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म जतिपनि फ्रेन्चाइजी लिग खेले। त्यहाँ राम्रै प्रदर्शन भएको छ। आशा छ, बिगबास लिगमा पनि त्यस्तै प्रदर्शन जारी राख्न सकुँ। नेपालको नाम अझै उचो बनाउँन सकुँ।’
मेलबर्न स्टार्सका कप्तान ग्लेन म्याक्सवेलले प्रतियोगिता अघि सन्दीपलाई स्मार्ट बलरका रुपमा चित्रण गरेका छन्।
‘सायद, सन्दीपले बलियो र राम्रो सिकाई पाएका छैनन् तर उनी आफ्नो फास्र्ट आर्म एक्सनबाट सबै ब्याट्सम्यानलाई घुमाइदिन सक्छन्,’ म्याक्सवेलले सन्दीपको बारे भनेका छन्, ‘उनी स्मार्ट युवा बलर हुन्। उनीसँग दिल्लीमा प्रशिक्षण गर्ने क्रममा मलाई उनको एक्सन बुझ्न दुई हप्ता लागेको थियो। त्यसअघि म उनको हरेक बलमा सिधा छक्का हान्ने प्रयास गर्थे र बोल्ड हुन्थे।’
‘उनी साच्चकै स्टार हुन्,’ म्याक्सवेलले थपे, ‘मैले आइपिएलमा उनको प्रदर्शन र प्रभाव देखेको थिए। उनको आत्मविश्वास लेभल पनि निकै माथि छ।’
प्रकाशित ६ पुस २०७५, शुक्रबार | 2018-12-21 14:35:41